नयाँ डकुमेण्ट्री: बुटवल देखी गुल्मी रेसुङ्गासम्म (भिडियो) – Gulmiews
नयाँ डकुमेण्ट्री: बुटवल देखी गुल्मी रेसुङ्गासम्म (भिडियो)
No comments	प्राचिन कालदेखि नै प्रसिध्द नेपालको चारधाम मध्ये एकधाम रुरु क्षेत्र, पौराणिक, ऐतिहासिक गाथा बोकि जैविक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण तपोभूमि रेसुङ्गा क्षेत्र यसै गरि धार्मिक ऐतिहासिक महत्व बोकेका रुद्रवेणी, कुर्घा मालिका, श्रृंगाको श्रृंगीश्वर मन्दिर, परमानन्दनगर (चोरकाटे)को परमानन्द शान्ति आश्रम, जोहाङ ढावको सर्बेश्वर शिव मन्दिर, रुपाकोटको शिद्धस्थान, दिब्रुङ्गको आश्रम, लिच्छवीकालिन चारपालाको शिवालय, शान्तिपुरको चक्रेश्वर, ऐतिहासिक दरबार र कोटहरू गुल्मी चारपाला दरबार, मुसिकोट, चन्द्रकोट, ईस्माकोट, धुर्कोट जैविक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यले महत्व बोकेका मदाने लेक, टिमुरे लेक, दिब्रुङ दह, थाप्ले, कङ्के देउराली, सत्यवती, शालिमेदह, प्रकृतिको अनुपम संरचना विचित्र गुफा, सिदेश्वर गुफा आदि यसै जिल्लामा रहेका छन ।
माघे सँक्रान्तिमा रिडिमा नेपालकै सबैभन्दा ठुलो मध्येको मेला लाग्ने गर्दछ भने रुद्रबेनी लगायतका ठाउँहरुमा गण्डकी नुहाउनेको भिड लाग्ने गर्दछ। त्यसैगरी यहाँका मन्दिरहरुमा शिवरात्री, बैशाख सक्रान्ती, जनैपुर्णिमा, श्रीकृष्णजन्माष्टमी, रामनवमी, बिजयादशमी, लगायत पर्वहरुमा भक्तजनहरुको भिड लाग्ने गर्दछ। यहाँ धेरैजसो मन्दिरमा प्रत्येक बर्ष साउन महिनामा लघुरुद्राभिषेक कार्यक्रम संचालन गर्ने गर्दछन्।
हेरौँ युनिक मुभिजले तयार पारेको यो डकुमेण्ट्री:
Related Posts	यार्सागुम्बा – कहाँ पाइन्छ ? कसरि बन्छ ? के महत्व छ ? तेजेन्द्र थापा...	October 21, 2016	चन्द्र भण्डारीले घरमा दसैं नमनाएर किन बोटेगाउँका माझिहरुसँग मनाए? भिडियो र...	October 13, 2016	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	मृगौला पीडितको उपचारका लागि सहयोग